DAGAAL: Liverpool & Manchester United Oo Ku Dagaallamaya Qorshaha Isbeddelka Premier League, Naadiyadii Yaryaraa Oo Maxkamad Tegaya, Kulan Degdeg Ah Oo EPL Qabanayo Iyo Xogtii Ugu Dambaysay - Gool24.Net
DAGAAL: Liverpool & Manchester United Oo Ku Dagaallamaya Qorshaha Isbeddelka Premier League, Naadiyadii Yaryaraa Oo Maxkamad Tegaya, Kulan Degdeg Ah Oo EPL Qabanayo Iyo Xogtii Ugu Dambaysay
October 13, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Liverpool iyo Manchester United ayay ka go’an tahay in la hirgeliyo qorshaha isbeddelka iyo dibu-qaabaynta loogu samaynayo horyaalka Premier League, kaas oo ay kasoo horjeedaan kooxaha yaryar, dawladda UK iyo maamulka Premier League oo u arkaya in duullaan lagu soo qaaday.
Ra’iisal wasaaraha UK, Boris Johnson ayaa cambaareeyey qorshaha Project Big Picture ee ay soo diyaariyeen, dabadana ka riixayaan kooxaha Manchester United iyo Liverpool, kaas oo xidhiidhka kubadda cagta Ingiriiska ee FA uu ku tilmaamay inay saamigooda dahabiga ah u isticmaali doonaan sidii ay u joojin lahaayeen in isbeddelladan ay kooxahani wataan lagu sameeyo ciyaaraha.
Qorshahan oo dhigaya in 18 kooxood laga dhigo naadiyada horyaalka Premier League, isla markaana awood siinaya kooxaha waaweyn ee dhaqaalaha badan haysta, ayaa waxa uu meesha ka saarayaa tartanka EFL oo isagana ay maamulkiisu soo dhoweeyeen in la baabi’iyo, lana xoojiyo 18ka kooxood ee hindahani caddaynayo, sida uu guddoomiya Rick Parry maalintii u horreysayba ku muujiyey taageeradiisa.
Waxa kale oo qorshahani sheegayaa in la baabi’iyo ciyaar dhaqameedka muddada dheer soo jirtay ee Community Shield ee ay koobka ku kala qaadaan labada kooxood ee kusoo kala guuleysta Premier League iyo EFL, sidoo kalena waxa uu naadiyada yaryar ee dhaqaale xumadu ku habsatay ee heerka labaad iyo kasii hooseeya u ballan-qaadayaa lacago 250 milyan oo Gini ah oo lagu taageerayo.
Maamulka Premier League oo arrintan ka cadhaysan ayaa waxa uu shaaciyey in kulan degdeg ah ay dhamaan 20ka kooxood iskugu yimaaddaan si ay meesha uga saaraan qorshahan oo ay taageersan yihiin 12 kooxood oo si gaar ahna ay kuwa ugu waaweyn faa’iido badan ugu jirto.
Mulkiilaha Liverpool ee John Henry iyo qoyska Manchester United iska leh ee Glazers oo uu wakiil ka yahay Joel Glazer ayaa wada-hadallo ay yeesheen Isniintii waxay ku go’aansadeen inay sii wadaan qorshahan oo ay ka shaqeeyaan sidii loo hirgelin lahaa, iyagoo garab ka raadsanaya kooxaha kale ee waaweyn sida Chelsea, Manchester City, Arsenal iyo Tottenham oo iyagana la rumaysan yahay inay ku taageersan yihiin.
Siddeed kooxood oo ah kuwa yaryar ee horyaalka Premier League ayaa iyaguna qorshaynaya in marka uu soo dhamaado kulanka maamulka Premier League ay maxkamadda u gudbiyaan dacwad haddii ay kooxahani kusii adkaystaan qorshahoodan isbeddelka loogu samaynayo kubadda cagta, iyagoo waliba garab ka heli doona Ra’iisal Wasaare Boris Johnson, xidhiidhka FA iyo maamulka Premier League.
Qorshaha ay kooxaha waaweyni wataan oo dhigaya in marka 18 kooxood lagu soo koobo horyaalka ay naadiyada dib ugu noqonaya heerka labaad ee ka dhacay Premier League ay isreeb-reeb galaan, ayaa ay doonayaan in la hirgeliyo xili ciyaareedka 2022-23.
Kubadda cagta Ingiriiska oo isbeddelkii ugu weynaa uguna dambeeyey lagu sameeyey sannadkii 1992kii oo ah markii magaca Premier League la bixiyey, ayay naadiyada waaweyni u arkayaan in la gaadhay xilligii isbeddel lagu samayn lahaa ee mar kale kubadda dib loo firfircoonaysiin lahaa.